Nhau - Covid: Oxford-AstraZeneca kubviswa kwejekiseni kutanga
Iwo ekutanga madhizaizi eOxford-AstraZeneca coronavirus jab anofanirwa kupihwa sezvo UK ichikurumidzisa chirongwa chayo chekudzivirira kubata chirwere mumatambudziko.
Vanopfuura hafu yemiriyoni doses yemushonga vakagadzirira kushandiswa neMuvhuro.
Munyori wezvehutano akaritsanangura se "inguva yakakosha" muhondo yeUK kurwisa hutachiona, sezvo majekiseni ekudzivirira anobatsira kudzora hutachiona uye, pakupedzisira, kubvumira zvirambidzo kubviswa.
Asi Mutungamiriri akayambira kuti yakasimba hutachiona mitemo inogona kudiwa munguva pfupi.
Boris Johnson akati zvirango zvematunhu muEngland ndizvo “Pamwe zvava kuda kutosimba” apo UK ichinetseka kudzora hutachiona hutsva, hunopararira nekukurumidza.
NeSvondo zvinopfuura zviuru makumi mashanu zvitsva zvakavimbiswa nyaya dzeCovid dzakanyorwa muUK kwezuva rechitanhatu richimhanya, zvichikurudzira veLabour kusheedzera kukiyiwa kwechitatu kwenyika kuEngland.
Northern Ireland uye Wales parizvino vane yavo yekuvharira munzvimbo, nepo mamishinari eScotland vachasangana neMuvhuro kufunga mamwe matanho.
PM anotarisira 'makumi emamirioni' ejabha muna Kubvumbi
Iwe uchave rinhi kukodzera kune iyo Covid jekiseni?
Chii chingave 'chakasimba' coronavirus matanho anoreva?
Matirapi matanhatu echipatara - muOxford, London, Sussex, Lancashire neWarwickshire - achatanga kupa iyo Oxford-AstraZeneca jab nemusi weMuvhuro, nemadhiza 530,000 akagadzirira kushandiswa.
Mazhinji mamwe madosi aripo anozotumirwa kumazana eGP-inotungamirwa masevhisi uye dzimba dzekuchengetedza mhiri kweUK mumashure mevhiki, sekureva kweDhipatimendi reHutano neSocial Care (DHSC).
'End in kuona'
Munyori wezvehutano VaMatt Hancock vakati: "Iyi inguva yakakosha pakurwisa hutachiona hunotyisa uye ndinovimba ichapa tariro kumunhu wese kuti kupera kwehosha iyi kwave pedyo."
Asi akakurudzira vanhu kuti varambe vachitevera nhungamiro yekudzora nharaunda uye nemitemo yecoronavirus yeku "chengetedza makesi pasi uye kuchengetedza vatinoda".
Sezvo kukwira kuchangobva kuitika kwezviitiko zveCovid kunoisa kumanikidza kwakanyanya paNHS, UK yakurumidzisa kuburitsa nhomba nekuronga kupa zvikamu zviviri zvekudzivirira mavhiki gumi nemaviri zvakaparadzana, zvatanga kuronga kusiya mazuva makumi maviri nemaviri pakati pejabs.
Vakuru vekurapa vekuUK vadzivirira kunonoka kune yechipiri doses, kutaura kuti kuwana vanhu vazhinji vakabaiwa jekiseni rekutanga "kunonyanya kusarudzika".
Usakanganise, iyo UK iri mumhanyi inopesana nenguva.
Zvakawanda izvi zviri pachena kubva pachisarudzo chekunonoka muyero wechipiri wekudzivirira kuti utarise pakupa vanhu vazhinji sezvinobvira madosi avo ekutanga.
Pane humbowo hunoratidza kuti zvinogona kuita kuti jekiseni reOxford-AstraZeneca ribudirire, asi harinyatso kujeka kuPfizer-BioNTech sezvo miedzo isina kutarisa kushandisa mushonga nenzira iyi.
Asi kunyangwe kana chimwe chinhu chikarasika maererano nedziviriro kubva kuhutachiona, imwe dose inoramba ichikurudzira mhinduro yemumuviri iyo inobatsira kudzivirira kurwara kwakakomba.
Saka inokurumidza sei iyo NHS kuenda? Pakupedzisira inoda kusvika kumamiriyoni maviri emadhizaini pasvondo.
Izvo hazvingakwanisike svondo rino - pane zvinofungidzirwa kuti zvinongova nemiriyoni imwe chete yemajekiseni maviri akagadzirira kushandiswa.
Asi nhasi kunoratidza kutanga kweNHS kuisa iyo yekuwedzera pasi.
Kuwedzera nekukurumidza mujekiseni rekudzivirira kunofanira kutevera.
Muchokwadi, iyo inogumira chinhu inogona kunge iri yekupa pane kumhanya uko iyo NHS inogona kubaya.
Nekuda kwepasirese kwemajekiseni, kuve nechokwadi kuti pane zvakakwana zviyero zvakagadzirira-kuenda-ingangove iri dambudziko hombe.
Mushonga wePfizer-BioNTech ndiyo yaive jab yekutanga yakatenderwa kuUK, uye vanhu vanopfuura miriyoni vakawana jab ravo rekutanga.
Munhu wekutanga kutora jabhu musi wa8 Zvita, Margaret Keenan, akatove nemushonga wake wechipiri.
Iyo Oxford jab - iyo yakabvumidzwa kushandiswa mukupera kwaZvita - inogona kuchengetwa pane chaiwo tembiricha tembiricha, zvichiita kuti zvive nyore kugovera nekuchengetedza kupfuura iyo Pfizer jab. Izvo zvakare zvakachipa padhizaini.
IUK yakachengetedza zana mamirioni emadhizaini eOxford-AstraZeneca jekiseni, inokwana vazhinji vevagari.
Kuchengeta vagari vemo uye vashandi, vanhu vane makore anopfuura makumi masere, uye pamberi pevashandi veNHS ndivo vachatanga kuzvigamuchira.
Varapi vezvehutano uye vekudzivirira vekunze vakabvunzwa kuti vaone kuti dzimba dzekuchengeta dzinogara munzvimbo mavo dzabayiwa nhokwe pakupera kwaNdira, akadaro DHSC.
Dzimwe nzvimbo mazana manomwe nemakumi matatu dzekudzivirira dzakatomisikidzwa muUK, huwandu hwese hwakaiswa kuti upfuure chiuru chakazotevera svondo rino, iro department rakawedzera.
Post nguva: Jan-04-2021